'Hiddo' waa Filim Sameyn Wanaagsan, Khatar leh, walwal-ku abuureysa
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh [Dib u eegista SXSW] 'Hiddo' waa Filim Sameyn Wanaagsan, Khatar leh, Walwal-Ba'an
[Dib u eegista SXSW] 'Hiddo' waa Filim Sameyn Wanaagsan, Khatar leh, Walwal-Ba'an
Laga soo bilaabo tan labaad Caleenta bilaabmaa, waad ogtahay inaad ku jirto wax ka duwan. Si tartiib tartiib ah u dhaweyso aqal dollhouse oo u rogo guri dhab ah ayaa si xeel dheer uga warqaba naftiisa, waxaa lagugu jiidayaa wax aan amaan ahayn. Waa riptide muuqaal ah oo kugu soo jiidan doona bad aad u naxariis daran.
Sheekadu waxay daba socotaa qoyska Graham, oo la tacaalaya dhimashadii ugu dambeysay ee aabbe qoyskooda. Wax yar ka dib aaska, qoysku wuxuu bilaabaa inuu ogaado in xididdada awoowayaashood ay lahaan karaan xiriir cabsi leh.
Caleenta waa weerar istiraatiiji ah oo lagu hayo dhagaystayaasheeda. Guriga qoyska Graham waa aqal-dhismeed dhab ah oo la dheereeyey, waxay si joogto ah u dareemeysaa inay ka baxsan tahay kilter leh qalab gaar ah oo leh dherer dherer ama cabbir abuuraya qayb yar oo ka mid ah raaxo-darrada kale ee adduunyo ee horeyba uga shaqeyneysa maskaxdaada daawashada. Naqshadaynta dhawaqa waa garaaca wadnaha oo joogto ah kaas oo la ciyaaro inta badan ficilkii ugu horreeyay ee filimka. Labadaas walxood oo wada jira ayaa durba si hordhac ah kuu soo diraya, ka hor inta aan walxaha xun la soo bandhigin.
Waxa runti maskaxdayda garaacaysa ayaa ah in kani yahay agaasime, muuqaalkii ugu horreeyay ee Ari Aster. Ninkan daacadda ah waa inuu ku noolaa nolol badan sida agaasime hore u keenay, wuxuu ku adag yahay filimkiisa. Caleenta waa walaac khatar ah oo soo saaraya filim sameynta, Aster wuxuu u abuuraa waddo cusub, ceyriin iyo cabsi badan oo ku saabsan nooca naxdinta.
Filimku wuxuu ahaan lahaa mid gebi ahaanba ah riwaayad qoys oo wuu nuugi lahaa. Aster waxay taxaddar siisaa in waxyaabaha riwaayadaha ka dhiga ay shaqeeyaan, iyadoo si tartiib tartiib ah u soo bandhigaysa baqdinta gurguurta. Wax badan oo la mid ah ku dhajinta raha dheriga iyada oo heerkulku si tartiib tartiib ah kor ugu kacayo, durba waxaad ku karisay qadar aad u fara badan oo muuqaal iyo fikrado naxdin leh oo la yaab leh.
Waxaan ahay taageere cabsi badan oo A24 ah. Filimaan noocyo dabiici ah sida Witch waa koobkayga shaaha gaarka ah. Caleenta waxay qaadataa astaamaha jawiga waxayna ku dartaa culeys iyaga ayagoo ku gudbinaya muuqaalka waxa dhageystayaasha cabsida leh ay jecel yihiin (haa, xitaa qaar ka mid ah baqdinta aadka u wax ku oolka ah) abuurista filim dareemaya inuu dabooli karo farqiga u dhexeeya taageerayaasha qunyar socodka gubanaya iyo dhageystayaasha guud ee cabsida badan .
Sawirada filimka laga jaray si dhab ah ayuu madaxaaga ugu dheggan yahay. Weli waan ka fekerayaa hadda. Waxaa jira riwaayado badan oo sheekooyin ah oo runtii xariif ku ah farsameynta khibrada si aan kaaga tago kaliya sawirada si dhab ah loo wasakheeyey laakiin walxaha laga yaabo inaad rabto inaad aado gurigaaga oo aad cilmi baaris ku sameyso.
Kabka lagu tuuray waa weynaan saafi ah. Toni Collette iyo xubin kasta oo qoyskeeda ka mid ah waxay gacanta kuugu hayaan iyagoo maraya wadooyin caan ah, oo reeraha ah ka hor intaadan kaaga tagin keligaa iyo adiga oo aan ku wareegin sheekada qoyska mugdiga ah. Murugada iyo dabeecadda weyn ee Collette waxay muujineysaa shaqada si argagax leh oo dabiici ah oo salka ku haysa.
"Caleenta waa walaac khatar ah oo soosaarida filim sameynta, Aster wuxuu u abuuraa waddo cusub, ceyriin iyo cabsi badan noocyada argagaxa. ”
Caleenta dhab ahaan waa guul laga argagaxo dhinac walba. Waxay ku kacdaa waxyaabo aan soo jiidanayn oo leh geedi socodka murugada iyo firfircoonida qoyska ka dibna u rogrogto iyaga oo ku dhowaad qaab qalloocan. Waa filim af-celis ah, ujeeddadiisuna tahay inaan ku caajiso oo gebi ahaanba way iga shaqaysay. Meesha aan fadhiyo, ma jirto qaab uusan filimkani ugu dhammaanayn liistadayda 5-ta ah dhammaadka sanadka. Filimkan waa mid qatar ah mana sugi karo inaan markale la kulmo.
Dib u eegis: Zak Bagans '' Jinni Jin '
Trailer-ka 'Ranger' waa Dhagar-qaade Rock Punk Rock [SXSW]